Somaliland waa dalkeyga iyo dadkeyga. | Goobsan Media Inc.
Home Fikradaha Somaliland waa dalkeyga iyo dadkeyga.
Somaliland waa dalkeyga iyo dadkeyga.
Intaas oo dhan waan ugu hambalyeynayaa. Allahna waxaan uga baryayaa in uu u xoojiyo nabadgelyada iyo horumarka.Maalinta ay go’aansadaan in ay u dabbaaldegaanna waan ku xushmeynayaa.
W/Q: Yusuf Garaad Cumar Axmed.
Galka Baarista, Xogta Qaraxii Xarunta Gobolka Banaadir.